Ugaxekile kunye nengcaciso engeyiyo: I-WhatsApp ibhloko engaphezulu kwezigidi ezi-2 zeAkhawunti zaseIndiya | Iindaba zokuhamba zaseIndiya
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zaseIndiya » Ugaxekile kunye nengcaciso engeyiyo: I-WhatsApp ibhloka ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeAkhawunti zaseIndiya
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zokuhamba zaseIndiya • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Iindaba ezijongene noKhenketho • Safety • Ubunqolobi kunye nolwaphulo-mthetho kubahambi: • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Itekhnoloji yoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Ugaxekile kunye nengcaciso engeyiyo: I-WhatsApp ibhloka ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeAkhawunti zaseIndiya
Ukufunyanwa kobundlobongela kusebenza kumanqanaba amathathu okuphila kweakhawunti: xa kubhaliswa; ngexesha lokuthumela imiyalezo; kwaye ekuphenduleni ingxelo engalunganga, efunyanwa nguWhatsApp ngohlobo lweengxelo zomsebenzisi kunye neebhloko.
I-WhatsApp ivimbe ii-akhawunti ezingama-2,000,000 XNUMX XNUMX zaseIndiya kwinyanga ephelileyo ngenxa yokuphula imithetho.
Ngama-95% eeakhawunti ezivaliweyo ngenxa yokugqitha kwemida ebekiweyo kwinani lamaxesha imiyalezo enokuthunyelwa kweli lizwe.
Eyona nto kugxilwe kuyo nguWhatsApp kukuthintela ukusasazeka kwemiyalezo eyingozi nengafunekiyo.
Inkqubo yemiyalezo emininzi esekwe e-US WhatsApp uxele ukuba uthintele ngaphezulu kwe-2,000,000, XNUMX, XNUMX akhawunti eIndiya phakathi kukaMeyi noJuni walo nyaka ngenxa yokuphula imithetho, kubandakanya 'nokuziphatha okuyingozi' kunye nokuthumela 'inqanaba eliphezulu kunye nokungaqhelekanga kwemiyalezo.'
Ngelixa i-2 yezigidi liqhezu nje lamapulatifomu ama-400 ezigidi zabantu abomeleleyo eIndiya, inani leeakhawunti ezivaliweyo libalulekile kuba limalunga nekota yezigidi ezisibhozo zokuvalwa kwe-WhatApp emhlabeni jikelele inyanga nenyanga.
Ukuqaphela ukuba i-95% yeakhawunti ibivalwe ngenxa yokugqitha kwimida ebekwe kwinani lamaxesha emiyalezo enokuthi ithunyelwe kwilizwe, iqonga lathi "eyona nto kugxilwe kuyo" ibikukuthintela ukusasazeka kwemiyalezo eyingozi nengafunekiyo.
Ukuchongwa kokuxhatshazwa kusebenza kumanqanaba amathathu okuphila kweakhawunti: xa kubhaliswa; ngexesha lokuthumela imiyalezo; kwaye siphendule ingxelo engeyiyo, esiyifumana ngohlobo lweengxelo zomsebenzisi kunye neebhloko, ”utshilo uWhatsApp kwingxelo yakhe.
Ngelixa iincoko zomsebenzisi-zomsebenzisi eqongeni zihlala zibhalwe ngokufihlakeleyo nangasese, WhatsApp ithe ihlawula "ingqalelo kufutshane nengxelo yomsebenzisi" kwaye ibandakanyeka neqela leengcali kunye nabahlalutyi ukuvavanya "iimeko ezinqabileyo" kunye nokuphucula ukusebenza ngokuchasene nolwazi olungelulo.
Ukongeza ekuphenduleni kwizikhalazo zomsebenzisi, uWhatsApp uthe ixhomekeke "kwiimpawu zokuziphatha" kwiiakhawunti zomsebenzisi, ezifumanekayo "ulwazi olungabhalwanga," iprofayili kunye neefoto zeqela, kunye neenkcazo zokuchonga abanokuthi babe ngaboni.
Amajelo eendaba ezentlalo kunye namaqonga onxibelelwano kufuneka apapashe iingxelo zenyanga nezidwelisa iinkcukacha zezenzo zawo phantsi kwemithetho emitsha yelizwe yeTekhnoloji yoLwazi. Le yayiyifomathi yesicelo sokuqala somyalezo ophethwe nguFacebook okoko imithetho iqale ukusebenza kutshanje.
Ngaphandle kokupapasha le ngxelo, uWhatsApp uqhubekile nokwala ukuveza imithombo yeendaba ezingezizo, ubuqhetseba kunye nemiyalezo yentsholongwane engekho semthethweni etyholwa ngurhulumente njengonobangela wobundlobongela bamahlokondiba kweli lizwe.
Nangona i-India imithetho emitsha ye-IT inesigatshana sokulandelela esifuna amaqonga ukulandelela kunye nokutyhila iiakhawunti apho ivela khona le miyalezo, uWhatsApp ucelomngeni kulo mbopheleleko enkundleni ngenxa yokuba imfihlo yomsebenzisi iya kuchaphazeleka.
Ngomhla ka-Meyi, inkampani yafaka isimangalo kwiNkundla ePhakamileyo yekomkhulu lesizwe iNew Delhi eyathi ulungiselelo "luyingozi yokungena kwimfihlo" kwaye iyakwaphula ukubethelwa kokuphela kokuphela kwe-app okubonakala kuqinisekisa imiyalezo kuphela zifundwe ngumthumeli kunye nomamkeli.